ပင်လယ်စောင့် နတ်မင်းကြီးက ဖန်ဆင်းပေးထားတာလို့ အယူရှိကြတဲ့ ကိုးရီးယား ပင်လယ်ပြင်ထဲက နတ်လမ်း – Askstyle
Jindo island and Modo island, South Koreauဒို ဆိုတဲ့ ကျွန်းကလေးတစ်ခုမှာ မိုးစက်ရဲ အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းကျယ် လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ အလွန်ထူးဆန်းလွန်းတဲ သဘာဝဖြစ်ရပ်တစ်ခု နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိပါတယ်…
တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်၊ ပင်လယ်ရေကျချိန်မှာ အဆိုပါ ဂျင်ဒိုကျွန်းနှင့်မိုဒိုကျွန်းအကြားက ရေပြင်မှာ အရှည် ၂.၈ ကီလိုမီတာ (၁.၇ မိုင်ခန့်)နဲ အကျယ် ၄၀ မီတာ (၁၃၁ ပေ ခန့်) ရှိတဲ့ မြေပြင်ပေါ်လာပြီး လူတွေဖြတ်သွားလို့ ရအောင် တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အထိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်…
လောကကြီးဟာဆန်းကျယ်လှပါတယ်…ထို သဘာဝဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ပွဲတော်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျင်းပကြပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လာရောက်ကြသူတွေလည်း နှစ်စဉ် ပါဝင်လေ့ ရှိကြပါတယ်… ထို ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်အထိ ပြင်ပကမ္ဘာမှ မသိရှိကြသေးပါဘူး…. ၎င်းနှစ်မှာ ပြင်သစ်ပြည်က သံတမန်တစ်ဦးတောင်ကိုရီးယားကို လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုအကြောင်းကိုပြင်သစ်သတင်းစာမှာ ရေးသားခဲ့ပြီးနောက်မှ ကမ္ဘာက သိရှိသွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်…
ထို ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ရဲ့ သမိုင်းကတော့ ဒီလိုပါ…တစ်ချိန်မှာ ဂျင်ဒိုကျွန်းရဲ့ရွာကလေးဟာ ကျားဆိုးတွေရဲ့ ရန်ပြုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ ရပါတယ်…ရွာသားတွေအားလုံးဟာ အနီးအနားက မိုဒိုကျွန်းကို ထွက်ပြေးခိုလှုံနိုင်ခဲ့ ကြပေမယ့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူ အဘွားအိုတစ်ဦးကတော့ ကူညီမယ့် သူမရှိလို့နောက်မှာ ကျန်နေခဲ့ ရရှာပါတယ်…
စိတ်ပျက်အားငယ်စွာနဲ့ သူမဟာ ပင်လယ်စောင့် နတ်မင်းကို တိုင်တည်ရှိခိုးဆုတောင်းခဲ့ ရာမှာ၊ နတ်မင်းကြီးက ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို နှစ်ခြမ်းခွဲကာ သူမကို သွေးဆာနေတဲ့ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘေးကနေလွတ်အောင် မိုဒိုကျွန်းကိုထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
အဲဒီကနေစပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပင်လယ်ရေပြင်ဟာ ကျွန်းနှစ်ကျွန်းကိုကူးပြီး လူတွေဖြတ်သွားနိုင်အောင် လျော့ နည်းပေးခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
ကြုံတောင့် ကြုံခဲမို့ လာရောက်ဆင်နွှဲကြပါတယ်…ထိုပွဲတော်အဖြစ်အပျက်ဟာ နှစ်စဉ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့ မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်… ကိုရီးယားတွေကတော့ နှစ်စဉ် မတ်၊ မေ နဲ့ ဂျူလိုင် လတွေမှာ ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါတယ်…
အခုတော့ ပိုမိုများပြားလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကြောင့် ပွဲတော်ကို ဧပြီလမှာလည်း ကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါတယ်…
credit : ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Jindo island and Modo island, South Koreauဒို ဆိုတဲ့ကြှနျးကလေးတဈခုမှာ မိုးစကျရဲ အံ့သွဖှယျရာဖွဈရပျဆနျးကယျြ လို့ ချေါဆိုတဲ့အလှနျထူးဆနျးလှနျးတဲ သဘာဝဖွဈရပျတဈခု နှဈစဉျ ဖွဈပျေါလရှေိ့ပါတယျ…
တဈနှဈကိုနှဈကွိမျ၊ ပငျလယျရကေခြိနျမှာ အဆိုပါ ဂငျြဒိုကြှနျးနှငျ့မိုဒိုကြှနျးအကွားက ရပွေငျမှာ အရှညျ ၂.၈ ကီလိုမီတာ (၁.၇ မိုငျခနျ့)နဲ အကယျြ ၄၀ မီတာ (၁၃၁ ပေ ခနျ့) ရှိတဲ့မွပွေငျပျေါလာပွီး လူတှဖွေတျသှားလို့ရအောငျ တဈနာရီလောကျကွာတဲ့အထိဖွဈနတေတျပါတယျ…
လောကကွီးဟာဆနျးကယျြလှပါတယျ…ထို သဘာဝဖွဈရပျဆနျးကို ပှဲတျောတဈခုအနနေဲ့ကငျြးပကွပွီးကမ်ဘာတဈဝှမျးက လာရောကျကွသူတှလေညျး နှဈစဉျ ပါဝငျလရှေိ့ကွပါတယျ… ထို ဖွဈရပျဆနျးကို ၁၉၇၅ ခုနှဈအထိ ပွငျပကမ်ဘာမှ မသိရှိကွသေးပါဘူး…. ၎င်းငျးနှဈမှာ ပွငျသဈပွညျက သံတမနျတဈဦးတောငျကိုရီးယားကို လာရောကျလညျပတျခဲ့ပွီးနောကျ ထိုအကွောငျးကိုပွငျသဈသတငျးစာမှာ ရေးသားခဲ့ပွီးနောကျမှ ကမ်ဘာက သိရှိသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ…
ထို ဖွဈရပျဆနျးကွယျရဲ့သမိုငျးကတော့ဒီလိုပါ…တဈခြိနျမှာ ဂငျြဒိုကြှနျးရဲ့ရှာကလေးဟာ ကြားဆိုးတှရေဲ့ ရနျပွုတိုကျခိုကျခွငျးကိုခံခဲ့ရပါတယျ…ရှာသားတှအေားလုံးဟာ အနီးအနားက မိုဒိုကြှနျးကို ထှကျပွေးခိုလှုံနိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ အသကျအရှယျကွီးရငျ့သူ အဘှားအိုတဈဦးကတော့ကူညီမယျ့သူမရှိလို့ နောကျမှာ ကနျြနခေဲ့ရရှာပါတယျ…
စိတျပကျြအားငယျစှာနဲ့သူမဟာ ပငျလယျစောငျ့နတျမငျးကို တိုငျတညျရှိခိုးဆုတောငျးခဲ့ရာမှာ၊ နတျမငျးကွီးက ပငျလယျပွငျကွီးကို နှဈခွမျးခှဲကာ သူမကို သှေးဆာနတေဲ့တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ဘေးကနလှေတျအောငျ မိုဒိုကြှနျးကိုထှကျပွေးနိုငျဖို့ဖနျဆငျးပေးခဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ…
အဲဒီကနစေပွီး နှဈစဉျနှဈတိုငျး ပငျလယျရပွေငျဟာ ကြှနျးနှဈကြှနျးကိုကူးပွီး လူတှဖွေတျသှားနိုငျအောငျ လြော့နညျးပေးခဲ့ရတယျလို့ဆိုပါတယျ…
ကွုံတောငျ့ကွုံခဲမို့လာရောကျဆငျနှဲကွပါတယျ…ထိုပှဲတျောအဖွဈအပကျြဟာ နှဈစဉျ မလေ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ ဖွဈပျေါလရှေိ့ပါတယျ… ကိုရီးယားတှကေတော့နှဈစဉျ မတျ၊ မေ နဲ့ဂြူလိုငျ လတှမှော ပှဲတျောကို ကငျြးပကွပါတယျ…
အခုတော့ပိုမိုမြားပွားလာတဲ့ဧညျ့သညျတှကွေောငျ့ပှဲတျောကို ဧပွီလမှာလညျး ကငျြးပဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ကွပါတယျ…
credit : ဝငျးကမ်ဘာကြျော